Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersum na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'onye akaebe ịgba okpu'? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 September 2019	• 26 Comments
isi mmalite: hardewoorden.nl
In isiokwu a Akọwaara m etu nwatakịrị Willem Holleeder Heineken si nwute na ogbugbu o mere nwere ike ịbụ PsyOps onye kwesịrị ịkwadebe iwu maka ụkpụrụ 'okpueze'. Mkpebi ịgba akaebe okpueze (nke Holleeder PsyOp wetara?) Pụtara na steeti nwere ike maa onye ọ bụla ọchọrọ ikpe, n'ihi na akaebe okpueze ahụ nwere ike bụrụ onye na-amaghị ama (site na usoro "onye akaebe na-amaghị ama"). Mwakpo a na "Derk Wiersum" nwere ike ịgba mbọ hụ na onye ọka iwu na-agbachitere nwere ike site ugbu a mee omume na-enweghị aha ma ọ bụ banye na ihe nchebe. Mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe onye akaebe na-amaghị aha, nke onye ọka iwu na-amaghị ama chebere ya na akaebe doro anya maka nkwenye. Na nkenke: steeti nwere ike ịnweta mmadụ niile n'azụ ụlọ na-enweghị ihe akaebe.
Nke ahụ bụ obere nchịkọta, mana mgbe ụfọdụ a ga-akpọrịrị anụ ọhịa aha. N'oge gara aga taa, na usoro iheomume Facebook m, echere m ma Dirk Wiersum dị adị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nwere ike na-emeso agwa miri emi. Na mgbakwunye, ndị agbata obi na ndị maara gị kwesịkwara ịdị n'otu teknụzụ (ghee ihu nke emepụtara site na AI na-eme ihe ndekọ ozugbo ma dekọpụta akụkọ akụkọ na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta sitere na miri emi). Think chere na nke a gafere oke? Aghọtara m nke ahụ, mana teknụzụ ahụ gara nke ukwuu na ihe niile anyị na-ahụ n'ihe onyonyo na ụda na-esite na igwe mgbasa ozi na igwe mgbasa ozi ndị ahụ dị n'aka ndị mmadụ dịka John de Mol (billionaire, onye nwe ANP na Talpa). Medialọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike niile iji kwado ha. N’ezie enweghị akaebe maka nke ahụ. Agbanyeghị, biko gụọ isiokwu a ohiha ọma ịchọpụta ihe ga-ekwe omume.
N’ezie, mmeghachi omume nke ndị na - elekọta mmadụ nwere ike ibute mmụọ site na ụdị niile (ezigbo ma ọ bụ nke miri emi?) Profaịlụ nke na - aza ajụjụ ndị dị ka: "Ikwu ihe dị ka nke jọgburu onwe ya n'anya ndị mmadụ nwụnahụrụ". Ọ bụ ihe nzuzu ịgọnarị na mmadụ nwụrụ ma ọ bụrụ na e nwere ezigbo ihe akaebe. Ọ ga-akarị arụ ma ọ bụrụ na anyị ji ya kemgbe ọtụtụ iri afọ PsyOps egwu ibu. Ihe m na - eme bụ ibulite ohere, na - enweghị iburu ụzọ na nke a bụ n'ezie ikpe.
N'ọnọdụ ọ bụla, ikpe a ga-adaba n'ụzọ zuru oke na Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta maxim, nke nsogbu kpatara onwe ya na nzaghachi a na-akwali, na-eduga na oku maka iwu siri ike. Na iwu siri ike ga - adabara otu ndị kpọrọ oku maka ọdịnihu ka echezọ ngwa ngwa na oke iwe. Ọ bụrụ na steeti chọrọ n'ezie ka onye ọ bụla dissident n'azụ Ogwe, onye na-adịghị adị (“onye na-anaghị ama ọkwa okpueze”) nwere ike inye nkwupụta ịgba ama (lee Holleeder gbasara mkpebi ịgba okpu ikpe). Onye ọka iwu na-agbachitere ekwesighi ịdị (n'ihi na ọ nwere ike ịbụ onye na-amaghị ihe ọ bụla n'ọdịnihu) yabụ onye ọ bụla nwere ike kwụsị n'azụ ụlọ mkpọrọ. Enwere ike itinye uche mmụọ ma ọ bụ kpọchigidee ọ bụla megidere ọchịchị a.
Dịka icing na dezaati enwere ike enwere iwu nke n’eme ndagide. E kwuwerị, anyị ga-ekpochapụ ngwa ọgụ niile dị n'okpuru akwa n'ụlọ ndị ahụ niile na Amsterdam! Nke a nwere ike ọ gaghịzi adị!
DNA na uwe Anne Faber mere ka Michael Panhuis, mana oge na-adịghị anya!
Anja Schaap hụrụ ndị nwụrụ anwụ n'oké osimiri site n'ụgbọ mmiri Germany? Nke ahụ ọ ga-ekwe omume dịka iwu nke okike si dị?
Tags: ọkàiwu, Derk Wiersma, Derk Wiersum, dood, agba, akwụkwọ mgbasa ozi, ogbugbu igbu mmadụ, gburu
18 September 2019 na 21: 51
Ọ bụrụ na ịgbasoghị ihe omume gara aga (adịgboroja) gara aga ị ga-ekwere akụkọ nke taa 18 Sept 2019 ọzọ.
Hap ilo, dị njikere, yabụ ị ga - agbaso akụkọ (adịgboroja) n'ihi na ma ọ bụghị na ị gaghị aghọta usoro ma ọ bụ nsonaazụ nke akụkọ (adịgboroja)
18 September 2019 na 21: 53
Ndi mmadu na umu aka kwuru si,
Kedu ka ị ga - esi guzoro mgbe awa ole na ole gasịrị wee kwuo na ọ gbasara ọrụ ya, ebe nyochabeghị ihe ọ bụla.
Kedu otu ime ụlọ nke abụọ ga-esi kwuo nke ahụ ozugbo, agbanyeghị na e nyochala ihe efu.
Kedu ihe kpatara na anyị anaghị anụ maka CPR
Onweghi onye teta si ambulances ebe ndi trauma nọ. Ee e, ha nọ ebe ahụ?
Kedu ka onye agbata obi ahụ nweghi isi nụ mkpọmkpọ ebe nwata nwoke na-agbada n'okporo ụzọ gwara ndị ntorobịa ozi ọma na ụzụ na-akpọte ya.
Kedu otu ị ga - esi nweta ya n’isi gị niile iji gosipụta ụmụaka dị ka a, agwala ndị nne na nna?
Na agbataobi kedu ka ị nurutụbeghị mkpu ọ bụla.
Nwere ike kwuolarị na ebe ahụ na-esi isi ...
Nwatakiri tetara ura, uzo di anya
Agbata obi anụbeghị ihe ??
18 September 2019 na 22: 28
Site na teknụzụ miri emi ị nwere ike ịre nwoke nwere nwatakịrị n'ubu ma tinye ihu na-adịghị adị (mana nke nwere ezigbo).
18 September 2019 na 22: 57
Ọkpụkpụ ụkwụ na-eme ka uche banye na ọnọdụ nnabata (NLP hypnosis)
19 September 2019 na 00: 32
Lee lee otu usoro ahụ si arụ ọrụ:
19 September 2019 na 08: 19
N'ezie, vidiyo nke onye agbata obi ahụ nwere ike ịbụ nke adịgboroja.
Obere nkọwa, aghaa.
Nwoke ahụ nọ n'azu ekpe ya nnukwu afọ na-aga ije na-aga; mgbe ahụ onyinyo dị mma ọzọ wee ghara ịdị ọzọ, mgbe ụfọdụ onyinyo adịghị ebe ahụ.
Onye agbata obi n’onwe ya; leba anya na okike na - ezighi ezi nke nku anya
na nke a na-akpọ enweta anya. Adịgboroja!
Mgbapụta ọkụ azụ na-eji ntụpọ ọkụ ọkụ ọkụ, ha ha, ngwongwo dị ọnụ ala n'ihi na nke ahụ pụtara na ọkụ ahụ adabaghị na jaket nwa nwoke nke kwesịrị idobe isi onye agbata obi na ndo.
Azụlitere n'azụ azụ kwesịrị ịbụ ihe siri ike site na anyanwụ.
Onyunyo nke van ahụ na mgbidi nwere akụkụ na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere ndò nke oriọna ahụ.
Ihe onyonyo nke ihu niile dị oke egwu, ọ dị oke nzuzu maka okwu, AT5 nwere igwefoto kachasị elu, mana ọ bụghị ugbu a, ha, ọ dị oke mma.
N'ezie ị naghị ahụ nke ahụ na ama, mana ị na-ahụ nke ahụ na laptọọpụ mbụ kachasị mma ma ọ bụrụ na i bugharịa ntakịrị.
18 September 2019 na 21: 55
Gee onye na-agba ajụjụ ọnụ ajụjụ. Ajuwo Hiddema ihe, ndi oru mgbasa ozi enweela azịza ya.
Onye gbara ajụjụ ọnụ kwuru, sị: "Ọ ga-ekwe omume na onye ọka iwu nke na-akwado ịgba akaebe okpueze nwere ike ịga n'agwaetiti a na-ebighị na ndụ ya niile."
A na-ahapụ ya ka ọ bụrụ onye na-amaghị aha, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ekpebisiworị ike na onye na-eme ihe nkiri Hiddema onye, ​​dị ka ya si kwuo, si na agba egwú ahụ pụta (dị ka o mechara kwuo na N'ajụjụ ọnụ) ga-esi na Hague dị ka ọkụkọ nwere ikike.
nkeji oge 3; 37
18 September 2019 na 22: 27
Oh ee na ihe ọzọ ị ga - abịa:
"A kpọrọ anyị ka anyị ghara ime ihe nke aka anyị."
N’oge na-adịghị anya ‘ime onwe gị’ nwekwara ike iduga ntaramahụhụ.
19 September 2019 na 08: 41
Nwa ahụ gbakwụnyere akaebe na nwa ahụ ga - eme ka m nwewe obi abụọ. Nwere ezi mmetụta uche niile. Nwoke ahụ si na 'art misdirection' vidio ị na - ekesa bụ ụdị mmụọ nke ọhụụ na - achọpụta na ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị mmadụ agaghịzi enwe ike ịga n’ihu na teknụzụ, ha ga-aghọ aghụghọ mgbe niile. Ọtụtụ mgbe site na otu klọb nke ndị na-agba ụbụrụ na-ekpe aka ekpe, ndị otu ụdị ememe wutere ya na ụbọchị 8e mgbe a mụsịrị ya.
Hiddema (na Wiersma) yikwara ka nke a nyere ya nsogbu. Ọ dịla anya m matara na Hiddema ga-eduga ndị bi na (na ndị omeiwu) gaa na steeti ndị uwe ojii, ebe ozugbo ihe a na-akpọ eziokwu rụtụrụ aka n'ihe, a ga-akpọ ihe ọ bụla 'omekome' ma kwupụta mkpesa. Ma nke ahụ bụ nke Baudet ma ọ bụ ya na Van Otten, ọ chọghị ịma. Na mberede, Aghọtaghị m na ọ nwere ike ịkpụ afụ ọnụ gburugburu moccro n'elu mgwakọta, 'ihe niile' egbe n'okpuru ihe ndina ha, ihe niile dị ala, ọ dị mma, ọ bụ ebum n'uche m na anyị ga - emecha bido agha ahụ. Ndị Alakụba, o doro anya na ha enweghị ike iji NWO ha na etiti Israel.
Obere obere ala. Dum ọgbaghara.
19 September 2019 na 13: 06
Mocro Mafia dị adị n'ezie ka ọ bụ ọ bụ mmadụ ole zụrụ AIVD zụrụ nke ọma nke enyere ikike igwu egwu Mocro Mafia?
19 September 2019 na 14: 03
A na-eme obere mgbalị iji zoo eziokwu ahụ bụ na Madurodam bụ n'ezie onye uwe ojii, nke a na -agbanyụ abụghịzi okwu ziri ezi. Junta na-amalite ịbịaru nso, onye ọka iwu na-amaghị ama, ọkàikpe na-enweghị aha ... nkwenye siri ike
19 September 2019 na 16: 55
Johnti mara mma nke ọma .. ma akwụkwọ dị n'ụkpụrụ ndị ahụ yiri nwanyị na-amaghị nwoke. E nyochabeghị nke a. Ọmarịcha ihe nkiri ..
19 September 2019 na 17: 24
Maka ọdịmma, anyị echefuru na ụdị ụdị Hegelian ndị a bụ ihe mkpali iji kpuchido ma ọ bụ kwụọ ndị na-akọ akụkọ steeti, onye ọka iwu / onye nta akụkọ / onye akaebe ịgba okpu. Nkwụghachi ego n ’ụtụ ndị na - akwụ ụgwọ bụkwa ihe ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa ebe a. Rulesgha na-achịkwa
20 September 2019 na 07: 25
Mbụ l'eme t'ẹ b'ọ dụru Holleeder; ugbu a anyị nwere ndị Mocro ma ọ bụ nacromaffia na Ridouan Taghi. Ha abuo doro anya ndi mmadu AIVD PsyOp ndi enyere ohere ka ha mee oru ha na mafia fake. Ọ na-eme ihe iji mejupụta usoro ndị uwe ojii ọhụrụ. Mwakpo a rụrụ n'ụlọ Telegraaf bụ adịgboroja; mwakpo a rụrụ n'ụlọ Panorama bụ adịgboroja. Ihe niile bụ adịgboroja. Mmeputa akuko nke mgbasa ozi n’ozi nmeko ya na ulo ikpe. Abọla ihe! Ọ bụ nsogbu, mmeghachi omume, egwuregwu Ngwọta site na steeti iji wepụta steeti ndị uwe ojii site na nzọụkwụ!
20 September 2019 na 09: 41
Ma ee, lee ya anya
Karel Reuterz dere, sị:
20 September 2019 na 09: 26
Onyenwe anyị Vrijland,
Daalụ nke ukwuu maka ederede a doro anya.
Mmadu ghutara na nchebara echiche a bu eziokwu.
Ma na nkọwa gị na ịkọwa contours akụkọ ihe mere eme achọtara m akụkọ gị
na-ada ụda karịa usoro mgbasa ozi kachasị.
Enwere ụzọ ndị ọzọ dị na ịntanetị na -eche otu echiche gị? Nke a kwesịrị ịrịa n'uche m.
20 September 2019 na 14: 14
Ee e, enweghi ọwa ndị ọzọ.
Usoro mgbasa ozi ọzọ na-enyocha ihe dị anya. Dị ka ọmụmaatụ, Niburu.co, sitere n'aka onye bụbu onye hụrụ ya n'anya nke Freddy Heiniken. Ya mere, o ghaghi ede na mgbachi a bu ihe ojoo.
Usoro mgbasa ozi ọzọ na-achịkwa na-anwa ime ka uche gị dịrị na 911; dee banyere ufos wdg na mgbe niile na-ekwu maka ịda flags (nke dị iche na PsyOp hoax).
21 September 2019 na 16: 56
Grapperhaus ọ na-ekwu eziokwu?
Na saịtị a, egosiri ya ugboro ugboro na mwakpo ụlọ Telegraaf nke dị na Basis weg bụ adịgboroja na mwakpo a na ụlọ Panorama bụkwa okwu zuru oke. Bọmbụ nke ọgbụgba mmiri na-ahapụ ọtụtụ mmebi karịa mbibi egosipụtara na enwere.
Ọ bụrụ na ndị omekome ahụ niile (ndị a na-akpọ) nwere njikọ na nke ahụ (ya na mwakpo Fake) mgbe ahụ ị nwere ike ịsị na Grapperhaus emeghị ihe omume ụlọ ha nke ọma na Parool edepụtaghị ihe pụtara na email ha. Ha na ekwu otu ihe, ha emee ihe anyi kwesiri ikwusi ndi ahu.
Kedukwa ihe kpatara na adịghịzigharị akụkọ a, ya mere, ụmụ nwoke na - ezighi ezi dịka John der Heuvel kpochapụrụ nnwere onwe ikwu okwu kpamkpam, onwe ya, BAH!
21 September 2019 na 17: 44
Grapperhaus ji ọrụ ndị ọzọ ..
21 September 2019 na 17: 09
Ihu igwe na - eme ka ihe mega hoax di nma bu na ha nwere mmasi karie onye na - eme ya karia onye a na - eme ya (odighi ihe ozo,
Otu osila dị, ndị ikike a akpọrọ ndị uwe ojii anaghị ekwu otu ihe
21 September 2019 na 17: 47
enwere ike VenJ na OM enwetawo ụfọdụ ndụmọdụ site na ezinaụlọ zorregieta. Ọbụna ihe akaebe ọzọ na-edozigharịrị ihe ahụ niile na ndị mmadụ anaghị anabata ya, na-atụ ụjọ na a ga-ekpughee okwu a maka ihe ọ bụ mmụọ maka iwu ọhụrụ. Crazy otú grapperhaus akwadebere ozugbo 🙂
24 September 2019 na 15: 01
Ekwenyeghị pablo escobar ka ọ kee agbụ nke tagi ~ (ọ bụrụ na ọ dị adị), otu onye na-eme ihe nkiri na nke ọzọ. Ihe ngosi a, o nwere ike ifu ego!
24 September 2019 na 20: 33
O YIKAR ITR IT ANA EGO?
Nnukwu ikpe ndị dị otú ahụ, dị ka mwakpo nke usoro ikpe ziri ezi, na-emebi usoro iwu na ihe ndị ọzọ
ebe onweghị onye omere iwu a mara ikpe, ọbụghị ma achọpụtaghị ya, onye na-enyo enyo, enweghị ihe ọ bụla na okwu nkwupụta ndị ahụ.
Ebumnuche nke Media katọrọ, nyocha nwere naanị foto atọ nke onye ahụ mebiri, yana naanị vidiyo 1 dị egwu nke onye ahụ metụtara.
Ebe ndi ezin’ụlọ omebe iwu nọ, akụkọ niile na - etinye mgbasa ozi n’ihe egwu n’ihi ebumnuche
iji bulie ike nke iri atọ na atọ na-enweghị ihe ọ bụla ga-enyere onye mere ya arụ.
Kedu ebe ndị ọka iwu nọ na NL na-achọ ajụjụ a na-agwụ ike, olee ebe iwu dị!
Sjon dere, sị:
28 September 2019 na 17: 31
N'oge na-adịghị anya mgbe mwakpo ahụ gasịrị, edepụtara ederede na ntanetị nke onye agbata obi kwuru na elekere mkpu ya apụla maka 07: 33, mgbe ahụ ọ nụrụ ntụtụ…
Ndị na-eji otu ọgwụ emee ihe ekwesịrị ịgwọta ya na Grapperhaus. Nke ukwuu maka iwu nkwekọrịta Dutch… ..
A họpụtala onye ọka iwu ọhụụ, onye ga-anọ n'enweghị onye ama ama. Ndị ọka ikpe na ndị na-agba akwụkwọ nwere ike ịnọgide na-enweghị aha n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na mmadụ ga-emechi ọnụ, ihe niile ha ga - eme bụ imepụta ihe iyi egwu ịnwale onye ahụ n'ụlọ ikpe na - amaghị akwụkwọ ma tụba ya n'ụlọ nga ...
8 October 2019 na 19: 18
Oh ee, ezigbo mmanya ị drinkingụ mmanya na Rode Hoed ma gị na ndị ikpe na ndị ọka iwu yana ndị ọka ikpe na ndị na-ahụ maka ndị ọzọ na-akparịta ụka.
Nkwupụta a gosipụtara izu oke, oke: "Ihe 9 / 11 na 2001 pụtara maka iwu ụwa, akara ngosi dị otú a bụ igbu ọchụ nke onye ọka iwu n'ihi ngosipụta nke ọrụ ya maka iwu iwu Dutch".
8 November 2019 na 00: 14
Ọzọkwa hụ ebe a na akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi nke Netherlands na akwụkwọ ahụ nwere ike / agaghị ebipụta akwụkwọ.
Ma ọ bụ akwụkwọ ahụ nwere ike ibuli veel gaa na akụkọ ifo zuru oke, pụtara echiche efu.
Ọ bụ na anyị ekwesịghị ichere afọ ole na ole ruo mgbe ndị ezigbo echiche bụ ndị maara banyere adịgboroja adịgboroja ahụ nwere oke mwute, ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ha ga-ebipụta akwụkwọ akụkọ HOAX HEINEKEn.
HEINEKEN enwetabeghị nwatakiri a chọrọ ya ka ya na ya lee anya.
" A ga - agha n'etiti US na Iran n'oge na - adịghị anya?
Okwu Greta Thunberg UN bụ ihe ncheta nke "ụmụ a chụpụrụ na incubators" okwu na Iraq agha »
Nleta nile: 13.947.165